रचना रिमालको जन्मदिनमा रातको १२ बजे शिशिरले दिए यस्तो सरप्राईज (भिडियो सहित)
August 13, 2020 974
नेपाली साङितिक आ’काशमा चर्चित रिया’लिटी शो नेपाल आईडलले परिचित बनाएको नाम हो रचना रिमाल । उनको आज जन्मदिन हो । जन्मदि’नमा शिशिर भण्डारीले रचना रिमाल’लाई सरप्राईज दि:एका छन् ।
रचना आज’बाट १८ बर्षमा प्रवेश गरेकी छि’न् ।झापा स्थायी घर भएकी उनी हाल काठ’माडौमा बसेर साङितिक सपनालाई साकार गर्न दिन रात मेहनत गरिरहेकी छन् । उनको मेहनत र ल’गाव अनुसारको सफलता पनि प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।
सानै उमेरदेखी मन्दि’रमा भजन गाउदै सुरु भएको उनको संगीत यात्राले स्कुलको कार्य’क्रम हुँदै विभिन्न कार्यक्रम’हरुमा फड्को मार्यो । संगीतको नशा बिस्तारै चड्दै गएपछि उनले नौ कक्षामै हुदा संगीतको औपचारिक ज्ञान पनि लिएकी थिइन् ।
नेपाल आईडल तेस्रो सिज’नको उत्कृष्ट ८ हुँदै संगीत यात्रालाई उनले ब्यवसायि’करण गरिन । आईड’लबाट बाहिएपछी उनले शि’शिर भन्डारी संग सहकार्य गर्ने मौका पाईन । शिशिरको अफरमा उनले ‘फोटो फिरिममा’ गीत गाईन ।
सो गीतले उनको उचा’ईलाई धेरै बढाएको छ । रचना’को स्वरमा रहेको सो गीत सामा’जिक संजाल, टिकटक तथा युट्युबमा अत्या’धिक रुचाईयो । यतिबेला उनी हरेक दिन जसो गीत रेकर्डि’ङ तथा भिडियो छायांकनमै ब्यस्त रहेकी छन् ।
हाल ११ कक्षा:मा अध्ययनरत रिमाल’लाई उनको परिवारबाट पनि यो क्षेत्रको लागि पुर्ण साथ सहयोग मिलिरहेको छ । हाम्रो तर्फबाट पनि जन्मदिनको अवसरमा रचना’लाई अझै धेरै सफल’ताको सुभकामना अर्पण गर्दछौ ।
हर्नुहोस यो रमाइलो भिडियो…..
Prevदुःखद खबर- कोरोनाका कारण नेपालमा आज थप ४ जनाको मृ’त्यु
Nextकुखुरा’को मासुमा पनि देखियो कोरोना भाइ’रस संक्रमण….
आज पनि बढ्यो सुनको भाउ, कति पुग्यो तोलामा ? हेर्नुहोस्…